အကြင်နာနန်းတော်: Gmail login ပုံစံသစ်လေးပါ .
Gmail login ပုံစံသစ်လေးပါ .
mozilla firefox မှာ ကိုယ့် Gmail အကောင့်ကို ပုံစံတစ်မျိူးနဲ့ ၀င်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အပျင်း
ပြေလေး ကလိကြည့်ချင်သူတွေနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
သူက Gmail ၀င်လိုက်ရင် အရင်က မြင်နေကြပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲ အောက်က ပုံစံလေး နဲ့ မြင်ရမှာပါ။
ဒီနေရာလေးကို ကလစ်ပြီးmozilla firefox မှာinstall လုပ်လိုက်ပါ.
ဒါလေးလုပ်ပြီးရင်တော့ mozilla firefox ကို Restart ချလိုက်ပြီး Gmail ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ ။
Gmail login လေးပုံစံပြောင်းသွားတာ မြင်တွေ့ရပါ့မယ်။
Gmail ပုံစံလေးတွေလည်းအောက်က ပုံလေးလို ပြောင်းသွားပါမယ်။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Saturday, July 02, 2011